ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » အဘယ်ကြောင့်အမျိုးသားများအချစ်ဆိုတာအကြင်နာတရားဘုရင်မကြီးပျား
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: မေ. 26 2020 |3မိဖတ်ပြီးသား
ဤသည်မှာတစ်ဦးချိန်းတွေ့ဆိုဒ်ဖြစ်ပါသည်, နှင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ချစ်သူများတစ်ဦးချိန်းတွေ့ဆိုက်, မနည်း. ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့အမြိုးသမီးခွေးအကြောင်းပဲမိနစ်များအတွက်စကားပြောနိုင်သည်? ထိုအခါငါဆိုလို “အမျိုးသမီးခွေး” အများဆုံး euphemistic သဘောမျိုးအတွက်, ကခွေးတစ်ကောင်ကိုမှမပြန်ပြောပြသည်အဖြစ်, ဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးခွေးသူတို့ရဲ့မကောင်းတဲ့နာမကိုပေးသနားသောထိုသူတို့၏လူ့မျိုးစိတ် counterpart. ဒါပေမဲ့ဒီတစ် SFW ဆိုက်သည်နှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုပြန်ပေးရန်အားထုတ်မှုအတွက်လေးစားမှုခွေးနှင့်ကိုချစ်သူတို့ကြောင့်ရဲ့အကြင်နာမဲ့ဘုရင်မပျားအကြောင်းကိုအစားစကားပြောထိုက်-ကြကုန်အံ့ (သို့မဟုတ် HQBs) သူတို့ကိုမချစ်ကြောင်း, ထိုလူတို့သည်, ပိုကောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆက်ဆံရေးကိုဖြစ်စေခြင်းငှါသူတို့ထံမှသင်ယူရန်အဘယ်အရာကိုလည်းမရှိ.
အချိန်နှင့်အချိန်ကိုပြန်, ငါဖြစ်စဉ်မှပထမဦးဆုံးလက်ကိုသက်သေခံဖြစ်ပါပြီ “ကောင်းတဲ့ကောင်လေး HQB ချစ်သောသူ”. ဒါဟာကိုကြည့်ရှု-တစ်ဦးမှဂရုစိုက်မယ့်တစ်ဦးအံ့ဩင်, စိတ်ကြင်နာတတ်သော, သူ့ရဲ့စိတ်ဟာအမြဲတမ်း HQB များအတွက်နောက်ပြန်ကျော် လာ. ဦးချ၏အနေအထားတွင်ရှိပုံပေါ်သောသူယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးနဲ့ရက်ရက်ရောရောယောက်ျား; သူကသူမ၏တောင်းဆိုချက်များကိုတုံ့ပြန်ရန်နှင့်သူမ၏ခွဲခြားသတ်မှတ်မှုမရှိအထင်အမြင်သေး၏တိုက်ခိုက်မှုများကိုသည်းခံမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှကိုတစ်မိနစ်လည်းချစ်ကြဟန်. သို့သော်ဤဆက်ဆံရေးကိုလည်းငါအသက်ရှည်၏စည်းကမ်းချက်များ၌တွေ့ခဲ့ဖူးသမျှအကောင်းဆုံးတချို့ရှိနေပါတယ်; ဒါကြောင့်လည်း, ငါသည်အရိပ်ပါပြီ, ဆက်ဆံရေးဟာအောင်မြင်မှုအချို့ degree ၏စည်းကမ်းချက်များ၌.
ဒါကြောင့်ကျနော်တို့လုပ်နိုင်တာ, လျောက်ပတ်သောအဖြစ်, စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအမျိုးသမီးသူတို့သည်နောက်ပြဿနာကိုဆွဲဆောင်နှင့်ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းရှိသည်ပုံရသည်လူစားမျိုးကိုဆွဲဆောင်နှင့်စောင့်ရှောက်ဖို့ HQBs ထံမှသင်ယူ?
1) HQBs မည်ဝါဖြစ်ကြောင်းကြံ့ခိုင်တဲ့သဘောမျိုးရှိသည်
HQBs သူတို့နေသောသိနှင့်သူတို့လိုချင်တဲ့အရာ. သူတို့စားပွဲသို့ဆောင်ခဲ့သောအရာကိုသိနှင့်၎င်းတို့၏အကျိုးစီးပွားများဟာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်များမှာကွောငျ့သူတို့စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်ကြပြီးသူတို့ရဲ့မိတ်ဖက်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကနေထူးခြားတဲ့ဖြစ်စေခြင်းငှါ. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခြိနျးတှေ့ဖို့ပျင်းစရာက, နှင့် HQBs ဒီထွက်နေသေးတယ်ပါပြီ.
2) HQBs သူတို့လောက၏အမိန့်ရှိသည်
တစ်ဦး HQB ပတ်လည်ကမ္ဘာ၏အမိန့်ရှိပုံရတယ် (သူမတကယ်မဖြစ်စေမဖြစ်စေ). ဒီအရည်အသွေးကသူမ၏အဖော်ရဲ့ရန်မသိစိတ်တစ်ပိုင်းတိုးမြှင့်ထောက်ပံ့ပေးအတ္တ-လျှင်သူသည်သူ၏မင်္ဂလာရှိ၏အောင်ကျော်အချို့သောထိန်းချုပ်မှုရှိပါတယ်, သူမအပေါ်ကိုထိန်းချုပ်ခဲ့သည် “ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေး”, သူ၏ထိန်းချုပ်မှုရှိပါတယ် “ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေး” proxy က. ထိုသို့တပြင်လုံးကိုဖွင့် “A = B, နှင့် B = ကို C လျှင်, ထို့နောက်တစ်ဦးက = က C” အရာ. ဘယ်လိုဒီအသုံးဝင်သောအစွန်အဖျားသို့ဘာသာပြန်ဆိုပါဘူး? တင့်တယ်သော, သင်နှင့်ငါကဲ့သို့သောစဉ်းစားဟန်ဖြင့်လူကျနော်တို့ရဲ့လုပ်ရပ်နှင့်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အတူအလွန်တဖက်သတ်ဆန်ဆန်မဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်. တဖက်သတ်ဆန်ဆန်ဖြစ်ခြင်းရန်လိုဖြစ်ခြင်းထက်အများကြီးကွာခြားသည်, အခြေခံကို M.O အရာဖြစ်၏. သင့်ရဲ့ပျှမ်းမျှ HQB ၏, မကျန်းမမာ-ဆည်းပူးသောမိန်းမပေးသည်ကားအဘယ်သို့, ၏ tenuous ထိန်းချုပ်မှု “ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေး”. ဒါပေမယ့်ပိုပြီးတဖက်သတ်ဆန်ဆန်ဖြစ်ခြင်းသည်သင်၏ကမ္ဘာ၏ကြီးမြတ်သော command ကိုလိုက်လျောလိမ့်မည်, ကျူးကျော်များ၏မဟုတ်ရင်အနုတ်ရလဒ်တွေကိုမပါဘဲ. ဒီဥပမာတစျခုသငျသညျအဘယျသို့ခငျြဖော်ပြမှရိုးရိုးနှင့်အဘယ်ကြောင့်သင့်ရဲ့ရှုထောင့်ကနေသဘာဝကျပါတယ်, sans ကိုသိက္ခာကျစေသောစကား, ဒါကြောင့်မကြာခဏ HQBs အားဖြင့်အလားတူတောင်းဆိုမှုများကိုအောင်အလုပ်သမားတဦးအတွက်အပေါင်းအဘော်လုပ်ကြလော့အမျက်ဒေါသ.
3) အစဉ်-ရေပန်းစားနှင့်သက်သေပြ, “စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုလိုပဲယောက်ျား”!
သင်မည်သို့အများအပြားချိန်းတွေ့ဆောင်းပါးတွေနဲ့စာအုပ်တွေဖတ်ကြပါပြီယောက်ျားတစ်ဦးစိန်ခေါ်မှုနှင့်အတူပေးအပ်စေလိုသောအခြေခံအယူအဆအချို့ဗားရှင်းကျိန်ဖြစ်ကြောင်း, သူတို့ကိုအောင်နိုင်မှတတ်နိုင်ကြသောအခါဒါကြောင့်သူတို့အပိုအထူးခံစားစိန်ခေါ်မှုကပြောပါတယ်? ဒါပေမဲ့, ကိုယ့်ကိုယ်, တစ်ဦးအမြဲ-ရရှိနိုင်ပါပွင့်လင်းစာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်သောသူထက် ပို. တွေ့ရခဲသောအမြိုးသမီးတပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှာတွေ့၏ပြောမည်. ငါဆိုသည်ကား-ဖြစ်ခြင်းသင့်ပါတယ်အပြုသဘောစိတ်လှုပ်ရှားမှုသို့မဟုတ်တုံ့ပြန်ချက်မဆိုမျိုးကိုဖော်ပြနှင့်အတူအနည်းငယ် stingy တခါတရံမှာတွေ့ရခဲသောအဖြစ်-ဘယ်လောက်တငျပွ (HQBs အတွက်ဘယ်ကလာအရာ​​ဖြစ်၏). တချို့ကယောက်ျားတစ်ဦး HQB မှသာယာသောတုန့်ပြန်မဆိုမျိုးကိုတရားမဝင်ဖို့ကြိုးစားနေ၏စိန်ခေါ်မှုကိုမဆီးတားနိုင်ဒါသူမအလွန်ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွား object တစ်ခုဖြစ်လာ.
သင်သည်အဘယ်သို့ပြုပါ (နောက်တဖန်အ, ထို့လျောက်ပတ်သောအဖြစ်, စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာမိန်းမသည်သင်ဖြစ်ကြသည်) စိန်ခေါ်မှုကိုပိုဖြစ်ခြင်းသို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလှည့်? ဤသည်ကိုအလွယ်တကူကဲ့သို့ disingenuous ဂိမ်းကစားရင်းကစာအုပ်တွေဖွစျလာနိုငျ “အဆိုပါစည်းမျဉ်းများ” (Fein နှင့် Schneider) အားလုံး, လူတိုငျးအတှကျအလုပျလုပျမပြုစေခြင်းငှါဆင့်ဆိုရမည်မှာဘယျအရာနှင့် ပတ်သက်. သောအခါနာမကျန်းဖြစ်-ခံစားမှုနှင့်ရှုပ်ထွေးသင်ထားခဲ့ရသော. အဲဒီအစား, အမှန်တကယ်အပြည့်အဝနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားစရာ-အောင်သင်တို့နှင့်အတူအရက်စွဲတစ်ခုချသံနှင့်ရိုက်မှစစ်မှန်တဲ့စိန်ခေါ်မှုဖြစ်သင့်အသက်တာကိုတည်ဆောက်ခြင်း. မသာကတပြင်လုံးကိုချွတ်စစ်ဆေးပါလိမ့်မယ် “စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်” ဒါကြောင့် ungracefully HQBs ဂုဏ်အင်္ဂါကိုက attribute (အမျိုးသားတွေဒါကြောင့်ဆွဲဆောင်မှုတွေ့ရသော), သူ့ကိုသင်နှင့်သင်၏ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတန်ဖိုးရှိသောအချိန်ဖြုန်းဖို့အချက်လုပ်ထားပါတယ်သောအခါမူကားသင်၏အရက်စွဲများစွာပိုမိုတန်ဖိုးထားခြင်းသည်ဟုခံစားရပါလိမ့်မယ်.
သူတို့သည်ဤအနည်းငယ်ပိုရင့်ကျက်ဖြစ်ခြင်းကိုသူတို့၏သီလအားဖြင့်ဖြစ်၏ရှိမရှိဂိမ်း-ခန့်မှန်းပြီးတုံ့ပြန်ရန်ကိုရပ်တန့်သည့်အခါအချိန်လည်းရှိ၏လာ, သို့မဟုတ်ဆက်ဆံရေးကိုယ်တိုင်ကသူ့ရဲ့ကနဦး flirtation ကျော်လွန်စိုက်ပျိုးပြီးမှ. ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဒီအစွန်အဖျားမှာအနည်းဆုံးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း HQB / Nice Guy ဆက်ဆံရေးအားဖြင့်ပေးအပ်သည်မြေတပြင်လုံး "အသက်ရှည်" Anomaly နှင့်အတူအသိအမှတ်ပြုနိုင်ပါသည်. HQBs သူတို့လိုချင်တဲ့အဘယ်သို့ဆို, သူတို့လိုတဲ့အခါ. အနည်းငယ်ဂိမ်းများနှင့်သိမ်မွေ့နက်နဲသောတစ်ဦး HQB နှငျ့ဆကျဆံရာတှငျရှိပါတယ်, များစွာသောသူတို့သည်ဤလနျးဆနျးရှာတွေ့. ဤသည်ယခင်အကြံပေးချက်များ-၌သင်တို့၏ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အတူရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ခြင်း၏စုံတွဲတစ်တွဲကနေဒြပ်စင်အတွက်မချည်မနှောင် (I.E. ဖြစ်ခြင်း အထက်စီး), ယေရှုသည်ယခုပင်ကပေးအပ်မယ့်ဆိုရင်, သင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်မှတပ်မက်လိုချင်သောစိတ်အဘယ်အရာနှင့်အတူအလွန်ရှင်းလင်းသော, သင်ကလက်ဆောင်ပေးအပ်ပါတယ် စိန်ခေါ်မှု သင်တို့သည်ဤမျှရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောထားပြီးသားတော်မူသောကြောင့်ဖွယ်ရှိတွေ့ဆုံရန်မျှော်တက်လှမ်းလာခံစားရပေလိမ့်မည်နှင့်သူသူ၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုမကြောက်ရွံ့မည်ကိုအချည်းနှီးဖြစ်လိမ့်မည်.
ဒါကြောင့်, ကြင်နာစိတ်နှလုံးသည်နှလုံးသားကို-ယူ, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှင့်နှလုံးနှင့်ဤအကြံပြုချက်ငါတို့သည်ကိုယ်ကိုကိုယ်များအတွက် Nice Guy နှင့်စျေးကွက်၏အနည်းငယ်ပိုကြီးရှယ်ယာနိုင်သည်ဆိုသော!